KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Itoobiya oo lagu qabtay rag ka tirsan Al-Shabaab
Itoobiya oo lagu qabtay rag ka tirsan Al-Shabaab
Muqdisho (KON) - Dowlada Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay gacabta ku dhigtay dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
TVga Itoobiya ayaa baahiyay in ciidamada amaanka ee wadankaasi ay gacanta ku soo dhigeen ilaa iyo 15-dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab.
Warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan sirdaanka dowlada ayaa sheegay in dagaalyahanadaan maalmahaan oo dhan lagu raadjoogay isla markaana haatan gacanta lagu soo dhigay.
Sidoo kale Tvga ayaa soo bandhigay walxaha qarxa, qoraha fod fududd, calanka Al-Shabaab, iyo waliba muuqaalo bixinaya fariimo dagaal oo ay wateen dadka la qabtay.
Sirdoonka wadanka itoobiya faah faahin kama uusan bixin shaqsiyaadla la qabtay halka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan, inkatoo ay sheegeen in ragaan ay taba baro ku soo qaateen wadanka Soomaaliya gaar ahaan xerayaha Al-Shabaab.